Ball Bearings, Motor Bearings, Bearings Manufacturer, tsara Quality Bearings - Anrui
Anrui Nihazonako Group Co., Ltd., Dia vondrona orinasa mandray anjara amin'ny bearings nitodika, hafanana fitsaboana, mitoto vary sy ny fivoriana ary koa ny milina mitoto bearings famokarana miaraka amin'ny Ady Lehibe I ny marika. Amin'ny maha-matihanina Groove lalina baolina bearings mpanamboatra, dia mifehy ny tsara avy amin'ny ara-nofo, dingana hatramin'ny farany vokatra. Ady Lehibe I bearings dia be ampiasaina amin'ny maotera, maotera-fiara, conveyor rafitra, ascenseur sy escalator, tokantrano fitaovana, sns nokleary maotera ary mba ho izao tontolo izao hanodinana ny reliably.
Izahay manome antoka ny kalitaon'ny 1 year asa ara-dalàna eo ambany fepetra. Ihany raha toa ka tsy mitondra ny vokatry ny kalitao isan-taona, Ady Lehibe I Te hanolo-jaza ny tsy nahomby ny iray vaovao mitondra ny iray.
Ny Factory dia nitombo lasa ny Premier ISO / TS16949: 2009 Certified mpanamboatra ny avo lenta, Cost-Mandaitra entana
Ady Lehibe I dia matihanina bearings mpanamboatra. Tanteraka isika manana 6 orinasa miorina ao Huangshan, Hangzhou, Hubei tsirairay avy.